Jehovha Mwari Akatanga Kutida—Chiito Chorudo Chikuru Pane Zvose Zvati Zvamboitwa | Swedera Pedyo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
1-3. Ndezvipi zvimwe zvinhu zvakaita kuti rufu rwaJesu rusafanana norumwe rupi norupi rwati rwamboitika?
PANE rimwe zuva rechirimo anoda kusvika makore 2 000 apfuura, mumwe murume akanga asina mhaka akamiswa pamberi pedare, akabatwa nemhosva dzaakanga asina kumbopara, ndokubva atambudzwa kusvika afa. Uku kwakanga kusiri iko kuuraya kwoutsinye kusina ruramisiro kwokutanga munhoroondo yevanhu; uyewo zvinosiririsa kuti, kwakanga kusiri iko kwokupedzisira. Kunyange zvakadaro, rufu irworwo rwakanga rusina kufanana norumwe rupi norupi zvarwo.
2 Murume iyeye sezvaakatambura mumaawa ake okupedzisira anorwadza, matenga pachawo akaratidza kukosha kwechiitiko ichi. Kunyange zvazvo akanga ari masikati makuru, kamwe kamwe rima rakafukidza nyika. Sokurondedzera kunoita mumwe munyori wenhau dzakaitika, “chiedza chezuva chakadzima.” (Ruka 23:44, 45) Zvadaro, nguva pfupi murume wacho asati afa, akataura mashoko aya asingakanganwiki okuti: “Zvaitwa!” Zvechokwadi, nokuradzika upenyu hwake akaita chimwe chinhu chinoshamisa. Chibayiro chake ndicho chakanga chiri chiito chorudo chikuru pane zvose zvati zvamboitwa nomunhu upi noupi.—Johani 15:13; 19:30.
3 Murume iyeye chaizvo akanga ari Jesu Kristu. Kutambura kwake nokufa kwake pazuva iroro rakaipa, Nisani 14, 33 C.E., kunozivikanwa zvikuru. Zvisinei, chimwe chinhu chinokosha chinowanzoonekwa sechisina basa. Kunyange zvazvo Jesu akatambura kwazvo, mumwe munhu akatotambura kupfuura ipapo. Chokwadi chaicho ndechokuti, mumwe munhu akatoita chibayiro chikuru zuva iroro—chiito chikuru kwazvo chorudo chati chamboitwa nomunhu upi noupi ari pasi nokudenga. Chaiva chiito chei ichocho? Mhinduro yacho inopa sumo yakakodzera panhau inokosha pane dzose: Rudo rwaJehovha.
Chiito Chikuru Pane Zvose Chorudo
4. Mumwe murwi weRoma akazosvika sei pakuona kuti Jesu akanga asiri munhuwo zvake, uye murwi iyeye akazoti chii?
4 Mukuru wemauto weRoma uyo akatarisira kuurayiwa kwaJesu akashamiswa nerima rakaitika Jesu asati afa uye kudengenyeka kwenyika kune simba kwakatevera. Akati: “Zvechokwadi uyu anga ari Mwanakomana waMwari.” (Mateu 27:54) Sezviri pachena, Jesu akanga asiri munhuwo zvake. Murwi iyeye akanga abatsira kuuraya Mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga waMwari Wokumusorosoro! Mwanakomana uyu aimbodiwa zvakadini naBaba vake?
5. Nguva huru yose iyo Jehovha noMwanakomana wake vakapedza vari pamwe chete mudenga ingaenzanisirwa sei?
5 Bhaibheri rinoti Jesu ndiye “dangwe rezvisikwa zvose.” (VaKorose 1:15) Imbofunga—Mwanakomana waJehovha akanga aripo zvimwe zvinhu zvose zvisati zvavapo. Saka Baba noMwanakomana vakanga vari pamwe chete kwenguva yakareba sei? Mamwe masayendisiti anofungidzira kuti nyika yose nechadenga zvave nemakore anosvika mabhiriyoni 13. Ungagona kunyange kufungidzira nguva yakareba zvakadaro here? Kubatsira vanhu kunzwisisa kuti nyika yagara zvakadini sezvinofungidzirwa nemasayendisiti, chimwe chiumbwa chomufananidzo wenyika yose chinoratidza mutsetse wokuverenga nguva wakareba mamita 110. Vashanyi sezvavanofamba vachitevedza mutsetse wenguva iwoyo, nhano imwe neimwe yavanofamba inomirira mamiriyoni 75 okuvapo kwenyika yose nechadenga. Nechokumucheto kwenguva yacho, nhoroondo yose yokuvapo kwevanhu inomirirwa nekamaki kamwe kakakora sebvudzi romunhu! Asi, kunyange kana kufungidzira uku kuri kwechokwadi, mutsetse wose iwoyo wenguva hauzombovi wakareba zvakakwana kuti umiririre urefu hwoupenyu hweMwanakomana waJehovha! Akanga achiitei mumakore ose iwayo asingaverengeki?
6. (a) Mwanakomana waJehovha akanga achiitei munguva yaakanga asati ava munhu? (b) Chisungo chorudzii chiripo pakati paJehovha noMwanakomana wake?
6 Mwanakomana nomufaro akashumira Baba vake se“mhizha.” (Zvirevo 8:30) Bhaibheri rinoti: “Kunze kwake [Mwanakomana] hapana kunyange nechinhu chimwe chakavapo.” (Johani 1:3) Naizvozvo Jehovha noMwanakomana wake vakashanda pamwe chete kuti vaite kuti zvimwe zvinhu zvose zvivepo. Inguva inofadza sei yavakava nayo! Zvino vazhinji vanobvumirana nokuti rudo ruri pakati pomubereki nomwana rwakasimba zvinoshamisa. Uye rudo “chisungo chakakwana chokubatana.” (VaKorose 3:14) Saka ndiani wedu zvino angatanga kunzwisisa simba rechisungo chakavapo kwenguva isingaverengeki yakadaro? Sezviri pachena, Jehovha Mwari noMwanakomana wake vakabatanidzwa nechisungo chakasimba kupfuura zvose chorudo chati chambovapo.
7. Apo Jesu akabhabhatidzwa, Jehovha akataura sei manzwiro ake pamusoro poMwanakomana wake?
7 Kunyange zvakadaro, Baba vakatuma Mwanakomana wavo pasi pano kuti azoberekwa somwana womunhu. Kuita kudaro kwaireva kuti kwemakumi emakore, Jehovha aizorasikirwa nokuva pedyo noMwanakomana wake anodiwa kudenga. Nechido chikuru, Akatarisa ari kudenga Jesu sezvaaikura kuva murume akakwana. Ave nemakore anenge 30, Jesu akabhabhatidzwa. Hatifaniri hedu kuita zvokufungidzira kuti Jehovha akanzwa sei pamusoro pake. Baba vacho vakazvitaurira pachavo vari kudenga kuti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa, wandatendera.” (Mateu 3:17) Vachiona kuti Jesu akanga aita zvose zvakanga zvafanoprofitwa nenzira yokutendeka, zvose zvaakakumbirwa, Baba vake vanofanira kuva vakafara zvikuru!—Johani 5:36; 17:4.
8, 9. (a) Chii chakaitika kuna Jesu musi waNisani 14, 33 C.E., uye Baba vake vokudenga vakanzwa sei nazvo? (b) Nei Jehovha akabvumira Mwanakomana wake kutambura uye nokufa?
8 Zvisinei, Jehovha akanzwa sei musi waNisani 14, 33 C.E.? Akanzwa sei apo Jesu akatengeswa ndokusungwa nemhomho usiku? Jesu sezvaakasiyiwa neshamwari dzake ndokutongwa zviri kunze kwomutemo? Sezvaakasekwa, kupfirwa mate, ndokurohwa nezvibhakera? Sezvaakazvamburwa zvokukwatura nyama kumusana? Sezvaakaroverwa, maoko nemakumbo, padanda achisiyiwa ipapo kuti arambe akarembera ipapo vanhu vachimutuka? Baba ava vakanzwa sei sezvo Mwanakomana wavo anodiwa akachema kwavari achitambudzika kwazvo nemarwadzo? Jehovha akanzwa sei Jesu paakafa, uye kokutanga kubva pakuvapo kwezvinhu zvose, Mwanakomana Wake anodiwa akanga asipo?—Mateu 26:14-16, 46, 47, 56, 59, 67; 27:38-44, 46; Johani 19:1.
“Mwari . . . akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe bedzi”
9 Tinopererwa nemashoko. Sezvo Jehovha achinzwa marwadzo, marwadzo ayo akanzwa pamusoro porufu rwoMwanakomana wake hatigoni kuatsanangura nemashoko. Inogona kutsanangurwa ivavariro yaJehovha yokuzvibvumira kuitika. Nei Baba vakazvibvumira kupinda mumarwadzo akadaro? Jehovha anotizivisa chimwe chinhu chinoshamisa pana Johani 3:16—ndima yeBhaibheri inokosha zvikuru zvokuti yakanzi Evhangeri muchidimbu. Inoti: “Nokuti Mwari akada nyika zvikuru kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe bedzi, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.” Naizvozvo vavariro yaJehovha yaiva iyi: rudo. Chipo chaJehovha—kutumira kwake Mwanakomana wake kuzotambura nokutifira—ndicho chakanga chiri chiito chorudo chikuru pazvose zvati zvaitwa.
Rudo rwaMwari Runorondedzerwa
10. Chii chinodiwa nevanhu, uye chii chakaitika kune zvinoreva shoko rokuti “rudo”?
10 Shoko iri rokuti “rudo” rinorevei? Rudo rwakarondedzerwa sechinhu chinonyanya kudikanwa nevanhu pane zvose. Kubva paucheche kusvikira muguva, vanhu vanotsvaka rudo, vanokura zvakanaka vachidziyirwa narwo, asi kana vakarushayiwa vanosvava ndokufa. Kunyange zvakadaro, rwakaoma zvinoshamisa kururondedzera. Chokwadi, vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro porudo. Kune mabhuku, nziyo, uye nhetembo dzisingaperi pamusoro parwo. Kuguma kwazvo nguva dzose hakujekesi zvinoreva rudo. Chaizvo shoko racho rinoshandiswa zvakanyanyisa zvokuti zvarinoreva zvechokwadi zvinoita sezvinoramba zvichinzvenga.
11, 12. (a) Ndokupi kwatingadzidza zvakawanda nezvorudo, uye nei ikoko? (b) Marudzi api orudo akataurwa mumutauro wechiGiriki chekare, uye ishoko ripi rinoreva “rudo” rinowanzoshandiswa muMagwaro echiKristu echiGiriki? (Onawo mashoko omuzasi.) (c) Chii chinonzi a·gaʹpe?
11 Zvisinei, Bhaibheri rinodzidzisa nezvorudo nenzira yakajeka. Expository Dictionary of New Testament Words raVine rinoti: “Rudo runogona kuzivikanwa bedzi nezviito zvarunoparira.” Zvakanyorwa muBhaibheri pamusoro pezviito zvaJehovha zvinotidzidzisa zvakawanda pamusoro porudo rwake—chidakadaka chokuti zvifambe zvakanaka nokuda kwezvisikwa zvake. Somuenzaniso, chii chimwe chaizogona kuzivisa unhu hwake uhu chinopfuura chiito chikuru chaJehovha pachake chorudo charondedzerwa kare? Muzvitsauko zvichatevera, tichaona mimwe mienzaniso mizhinji yokushanda kworudo rwaJehovha. Uyezve, tinogona kuwedzera kunzwisisa kubva mumashoko epakuvamba anoreva “rudo” akashandiswa muBhaibheri. Mumutauro wechiGiriki chekare, kwakanga kune mashoko mana anoreva “rudo.” * Pane iwayo, rinowanzoshandiswa zvikuru muMagwaro echiKristu echiGiriki ndia·gaʹpe. Rimwe duramazwi reBhaibheri rinoridana kuti “shoko rine simba pane ose atingafungidzira nokuda kworudo.” Nei?
12 A·gaʹpe zvinoreva rudo runotungamirirwa nezvinoratidzwa muMagwaro. Naizvozvo hakusi kungodawo munhu anokuda. Rwakakura, ndorwokufunga uye kuita uchiziva. Pamusoro pazvo, a·gaʹpe haruna udyire zvachose. Somuenzaniso, tarira zvakare pana Johani 3:16. “Nyika” iyo Mwari akada kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga chii? Inyika yevanhu vanogona kudzikinurika. Ivavo vanobatanidza vanhu vazhinji vari kutevedza nzira yokutadza muupenyu. Jehovha anoda mumwe nomumwe seshamwari yake sokuda kwaaiita Abrahamu akatendeka here? (Jakobho 2:23) Aiwa, asi Jehovha anoitira vose zvakanaka nenzira yorudo, kunyange zvichimudhurira zvikuru. Anoda kuti vose vapfidze, uye vachinje nzira dzavo. (2 Petro 3:9) Vazhinji vanodaro. Vakadai anovagamuchira nomufaro seshamwari dzake.
13, 14. Chii chinoratidza kuti a·gaʹpe kazhinji runobatanidza chidakadaka choushamwari?
13 Zvisinei, vamwe vane pfungwa isina kururama pamusoro pea·gaʹpe. Vanofunga kuti rinoreva rudzi rworudo rwokungodzidza mubhuku rusina ushamwari. Chokwadi ndechokuti a·gaʹpe rinowanzobatanidza kuda munhu nenzira youshamwari. Somuenzaniso, Johani paakanyora kuti, “Baba vanoda Mwanakomana,” akashandisa shoko rakafananawo nerokuti a·gaʹpe. Irworwo rudo rusina chidakadaka here? Cherechedza kuti Jesu akati, “Baba vanoda Mwanakomana kwazvo,” achishandisa shoko rakafananawo nerokuti phi·leʹo. (Johani 3:35; 5:20) Rudo rwaJehovha runowanzobatanidza chidakadaka chounyoro. Zvisinei, rudo rwake harumbochinjwi nokungonzwawo tsitsi. Nguva dzose runotungamirirwa nenheyo dzake dzouchenjeri uye dzakarurama.
14 Sezvataona, unhu hwaJehovha hwakakwirira, hwakakwana uye hunokwezva. Asi rudo ndirwo runokwezva kupfuura zvose. Hapana chimwe chinotiswededza pedyo zvine simba kudaro naJehovha. Zvinofadza kuti paunhu hwake rudo ndirwo rukuru. Izvozvo tinozviziva sei?
15. Bhaibheri rinotaura kuti chii pamusoro porudo rwaJehovha, uye mashoko aya akasiyana nemamwe pakudii? (Onawo mashoko omuzasi.)
15 Bhaibheri rinotaura chimwe chinhu pamusoro porudo charisingambotauri pazvimwe zvinhu zvikuru zvose zvinoumba unhu hwaJehovha. Magwaro haatauri kuti Mwari isimba kana kuti Mwari iruramisiro kana kuti Mwari uchenjeri. Anazvo, ndiye tsime razvo, uye hapana angaenzaniswa naye pazvose zviri zvitatu. Zvisinei, pamusoro pechechina, chimwe chinhu chakadzama chinotaurwa: “Mwari rudo.” * (1 Johani 4:8) Izvozvo zvinorevei?
16-18. (a) Nei Bhaibheri richiti “Mwari rudo”? (b) Pazvisikwa zvose zviri pasi pano, nei munhu ari mufananidzo wakakodzera worudo rwaJehovha?
16 Kuti “Mwari rudo” hakusi kungoenzanisa sokunge kuti, “Mwari akaenzana norudo.” Hatigoni kudzokorora mashoko acho tichitanga nemberi toti “rudo ndiMwari.” Jehovha anopfuura nokure unhu husingabatiki. Kunze kworudo, munhu ane manzwiro akasiyana-siyana. Asi, rudo rwakadzika zvikuru muna Jehovha. Nokudaro rimwe bhuku rinotaura pamusoro pendima iyi richiti: “Mwari zvaari chaizvo kana kuti unhu hwake, rudo.” Tinogona kuzvifunga nenzira iyi: Simba raJehovha rinoita kuti akwanise kuita chiito. Ruramisiro yake nouchenjeri zvinomutungamirira munzira yaanoita nayo chiito. Asi rudo rwaJehovha runomuita kuti aite chiito. Uye rudo rwake runogara ruripo munzira dzaanoratidza nadzo zvimwe zvose zvaari.
17 Zvinowanzotaurwa kuti Jehovha muenzaniso wakakwana worudo. Nokudaro, kana tichida kudzidza nezvorudo runotungamirirwa neMagwaro, tinofanira kudzidza nezvaJehovha. Chokwadi, tingakwanisa kuonawo unhu uhwu hwakanaka muvanhu. Asi nei huripo? Panguva yokusika Jehovha akataura mashoko aya, sezviri pachena kuMwanakomana wake: “Ngatiite munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu.” (Genesi 1:26) Pazvisikwa zvose panyika ino, varume nevakadzi bedzi ndivo vanogona kusarudza kuratidza rudo vachitevedzera Baba vavo vokudenga. Yeuka kuti Jehovha akashandisa zvisikwa zvakasiyana-siyana kuti zvifananidzire zvinhu zvikuru paunhu hwake. Asi, Jehovha akasarudza chisikwa chake chepasi chakakwirira kupfuura zvose, munhu, somufananidzo wokuratidza rudo, chinhu chikuru paunhu Hwake.—Ezekieri 1:10.
18 Patinoratidza rudo nenzira isina udyire tichidzorwa neMagwaro, tiri kuratidza chinhu chikuru paunhu hwaJehovha. Zvakaita sezvakanyorwa nomuapostora Johani kuti: “Kana tiri isu, tinoda, nokuti akatanga kutida.” (1 Johani 4:19) Asi Jehovha akatanga kutida munzirai?
Jehovha Akatanga Kutida
19. Nei zvingataurwa kuti rudo rwakaita basa rinokosha mubasa rokusika raJehovha?
19 Rudo harusi chinhu chitsva. Pamusoro pazvo, chii chakaita kuti Jehovha atange kusika? Kwakanga kusiri kuti akanga achinzwa kusurukirwa uye aida muvaraidzi. Jehovha akakwana uye ane zvose zvaanoda, hapana chaanoshayiwa chaangapiwa nomumwe munhu. Asi rudo rwake, runoonekwa nezviito, rwakangomuita kuti ade kupawo mufaro woupenyu kuzvisikwa zvake zvakangwara zvaigona kuonga chipo ichocho. “Wokutanga wezvakasikwa naMwari” akanga ari Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga. (Zvakazarurwa 3:14) Ipapo Jehovha akashandisa Mhizha yake kusika zvimwe zvinhu zvose, kutanga nengirozi. (Jobho 38:4, 7; VaKorose 1:16) Zvakomborerwa norusununguko, ungwaru, uye kunzwa, zvisikwa zvomudzimu zvine simba izvi zvakanga zvine mukana wokuratidzana rudo, uye chinotokosha zvikuru, kururatidzawo kuna Jehovha Mwari. (2 VaKorinde 3:17) Nokudaro, zvakaratidza rudo nokuti zvakatanga kudiwa.
20, 21. Adhamu naEvha vakaratidzwa uchapupu hwei hwokuti Jehovha aivada, asi ivo vakaitei nazvo?
20 Ndizvo zvazvakanga zvakaitawo nevanhu. Kubva pakutanga, Adhamu naEvha vakaratidzwa rudo zvikuru. Kwose kwose kwavaitarisa mumusha wavo weParadhiso muEdheni, vaigona kuona uchapupu hworudo rwaBaba kwavari. Ona zvinotaura Bhaibheri: “Jehovha Mwari akasima munda muEdheni, kumabvazuva, akaisapo munhu waakanga aumba.” (Genesi 2:8) Wati wambopinda mubindu rakanaka kana kuti paki here? Chii chakanyanya kukufadza? Chiedza chainjenjemera nomumashizha nechepakavanda here? Mavara akasiyana-siyana zvinoshamisa emaruva here? Kuyerera zvinyoronyoro kwekakova, kuimba kweshiri, uye kubhururuka kwezvipembenene kunenge nziyo here? Zvakadini nokunhuwirira kwemiti, michero uye kutumbuka kwemaruva? Kunyange zvakadaro, hapana paki nhasi ingaenzaniswa neyaiva muEdheni. Nei?
21 Bindu iroro rakasimwa naJehovha pachake! Rinofanira kuva rakanga rakanaka zvisingatsananguriki. Muti wose unofadza kuona nowomuchero unonaka wakanga urimo. Bindu racho rainyatsodiridzwa zvakanaka, rakakura uye rizere nemhuka dzakasiyana-siyana. Adhamu naEvha vakanga vane zvose zvokufadza upenyu hwavo nezvokuita nguva dzose, kusanganisira basa rinogutsa noushamwari hwakakwana. Jehovha ndiye akatanga kuvada, uye vaifanira kumudawo. Asi, vakakundikana kuita kudaro. Pane kuteerera Baba vavo vokudenga nenzira yorudo, vakavapandukira nenzira youdyire.—Genesi, chitsauko 2.
22. Zvakaitwa naJehovha nokupandukira kwomuEdheni zvakaratidza sei kuti rudo rwake rwakavimbika?
22 Izvozvo zvinofanira kuva zvakarwadza Jehovha sei! Asi kupandukira uku kwakakanganisa mwoyo wake une rudo here? Aiwa! “Ngoni dzake [kana kuti rudo rwakavimbika,” NW, Ref., mashoko omuzasi] dzinogara nokusingaperi.” (Pisarema 136:1) Nokudaro, nokukurumidza akava nechinangwa chokuita urongwa hworudo hwokudzikinura vana vane mwoyo yakarurama vaAdhamu naEvha. Sezvataona, urongwa ihwohwo hwaibatanidza chibayiro chorudzikinuro choMwanakomana wake anodiwa, mutengo mukuru kwazvo kuna Baba vacho.—1 Johani 4:10.
23. Ndechipi chiri chimwe chezvikonzero nei Jehovha ari “Mwari anofara,” uye mubvunzoi unokosha uchataurwa nezvawo muchitsauko chinotevera?
23 Hungu, kubva pakutanga Jehovha ndiye akatanga kuratidza vanhu rudo. Munzira dzisingaverengeki, “akatanga kutida.” Rudo runosimudzira kuwirirana nomufaro, naizvozvo hazvishamisi kuti Jehovha anorondedzerwa sa“Mwari anofara.” (1 Timoti 1:11) Zvisinei, mubvunzo unokosha unomuka. Jehovha anotida zvechokwadi somunhu mumwe nomumwe here? Chitsauko chinotevera chichataura nezvenhau iyoyo.
^ ndima 11 Shoko rechiito rokuti phi·leʹo, rinoreva “kuva nechidakadaka, kufarira, kana kuti kuda (semanzwiro ayo munhu angaita neshamwari yapedyo kana kuti hama),” rinoshandiswa kakawanda muMagwaro echiKristu echiGiriki. Shoko rakafananawo nerokuti stor·geʹ, kana kuti rudo rwomumhuri rwapedyo, rinoshandiswa pana 2 Timoti 3:3 kuratidza kuti rudo rwakadaro rwaizoshayikwa zvikuru mumazuva okupedzisira. Eʹros, kana kuti rudo rwomurume nomukadzi, haruna kushandiswa muMagwaro echiKristu echiGiriki, kunyange zvazvo rudo rworudzi irworwo ruchitaurwa muBhaibheri.—Zvirevo 5:15-20.
^ ndima 15 Mamwe mashoko eMagwaro akada kudai. Somuenzaniso, “Mwari chiedza” uye “Mwari moto . . . unoparadza.” (1 Johani 1:5; VaHebheru 12:29) Asi aya anofanira kunzwisiswa semashoko okufananidzira, nokuti anofananidza Jehovha nezvinhu chaizvo. Jehovha akafanana nechiedza, nokuti mutsvene uye akarurama. Maari hamuna “rima,” kana kuti kusachena. Uye angafananidzwa nomoto nokuda kwokushandisa kwake simba rokuparadza.
Pisarema 63:1-11 Rudo rwaJehovha tingarufananidza nei, uye chivimboi icho rudo irworwo runogona kuvaka matiri?
Hosea 11:1-4; 14:4-8 Munzirai umo Jehovha akaratidza rudo rwakaita sorwaBaba kuna Israeri (kana kuti Efraimi), pasinei nokusateerera kwechii?
Mateu 5:43-48 Jehovha anoratidza sei rudo sorwaBaba kuvanhu vose zvavo?
Johani 17:15-26 Munyengetero waJesu nokuda kwevateveri vake unotiratidza sei kuti Jehovha ane rudo nesu?
CHITSAUKO 1 “Tarirai, Uyu Ndiye Mwari Wedu”
CHITSAUKO 2 Unogona ‘Kuswedera Pedyo naMwari’ Zvechokwadi Here?
CHITSAUKO 3 “Mutsvene, Mutsvene, Mutsvene, Iye Jehovha”
CHIKAMU 1 “Mukuru Pakusimba Kwake”
CHITSAUKO 4 “Jehovha . . . Ane Simba Guru”
CHITSAUKO 5 Simba Rokusika—“Musiki Wedenga Nenyika”
CHITSAUKO 6 Simba Rokuparadza​—“Jehovha Munhu Wokurwa”
CHITSAUKO 7 Simba Rokudzivirira​—“Mwari Utiziro Hwedu”
CHITSAUKO 8 Simba Rokudzorera​—Jehovha Ari Kuita “Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva”
CHITSAUKO 9 “Kristu Simba raMwari”
CHITSAUKO 10 “Ivai Vatevedzeri vaMwari” Mukushandisa Kwenyu Simba
CHIKAMU 2 “Anoda Zvakarurama”
CHITSAUKO 11 “Nzira Dzake Dzose Dzakarurama”
CHITSAUKO 12 ‘Mwari Haaruramisiri Here?’
CHITSAUKO 13 “Mutemo waJehovha Wakakwana”
CHAPTER 14 Jehovha Anopa “Rudzikinuro Mukutsinhana Nevakawanda”
CHAPTER 15 Jesu ‘Anogadza Kururama Panyika’
CHITSAUKO 16 “Uite Ruramisiro” Mukufamba naMwari
CHIKAMU 3 “Une Mwoyo Wakangwara”
CHITSAUKO 17 ‘Haiwa Ukuru Hwouchenjeri hwaMwari!’
CHITSAUKO 18 Uchenjeri Huri mu“Shoko raMwari”
CHITSAUKO 19 “Uchenjeri hwaMwari Muchakavanzika Chitsvene”
CHITSAUKO 20 “Ane Mwoyo Wakangwara”​—Asi Anozvininipisa
CHITSAUKO 21 Jesu Anozivisa “Uchenjeri Hunobva Kuna Mwari”
CHITSAUKO 22 “Uchenjeri Hunobva Kumusoro” Huri Kushanda Muupenyu Hwako Here?
CHIKAMU 4 “Mwari Rudo”
CHITSAUKO 23 “Akatanga Kutida”
CHITSAUKO 24 Hapana Chinga“tiparadzanisa Norudo rwaMwari”
CHITSAUKO 25 “Tsitsi Huru dzaMwari Wedu”
CHITSAUKO 26 Mwari “Akagadzirira Kukanganwira”
CHITSAUKO 27 “Kunaka Kwake Kukuru Sei!”
CHITSAUKO 28 “Imi Moga Makavimbika”
CHITSAUKO 29 “Kuti Muzive Rudo rwaKristu”
CHITSAUKO 30 “Rambai Muchifamba Murudo”
CHITSAUKO 31 ‘Swedera Pedyo naMwari, Iye Achaswedera Pedyo Newe’
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Swedera Pedyo naJehovha
“Kuda Mwari Kunoreva Izvi”